Ugqirha weenyawo wakho
Umbuzo oqhelekileyo: Ngaba isifo samathambo sivela kumacala omabini?
Udidi: Ugqirha 0
Njengokuba isifo siqhubeka, iimpawu zihlala zisasazeka ezihlahleni, emadolweni, emaqatheni, engqinibeni, esinqeni nasemagxeni. Kwiimeko ezininzi, iimpawu zivela kumalungu afanayo kumacala omabini…
Eyona mpendulo ilungileyo: Uthintela njani iinzipho ezingena ngaphakathi ekunyukeni?
Ngaba abakhweli bafumana iinzipho ezingena ngaphakathi? Izicathulo zokunyuka kwamatye ziyilelwe ukuba zilingane kakuhle, kulapho kuvela khona ingxaki. Xa ubeka unyawo lwakho kwisihlangu ...
Ithatha ixesha elingakanani impompo yomqolo?
Kuthatha ixesha elingakanani ukugqobhoza empontshwa? Ukugqojozwa empontshwa kuthatha imizuzu engama-30 ukuya kwengama-45, kodwa kuya kufuneka uhlale ungqengqile esibhedlele ...
Umbuzo oqhelekileyo: Ngaba ungabekwa phantsi kweanesthesia kwitephu yomqolo?
I-anesthetic yendawo ifakwe kwi-back back yakho ukuze inqabile indawo yokubhoboza ngaphambi kokuba inaliti ifakwe. I-anesthetic yendawo iya kuluma ngokufutshane njengoko itofelweyo….
Umbuzo wakho: Ngaba lukhona uncedo lwezemali kubantu abane-arthritis?
I-Patient Access Network Foundation inikezela ngenkxaso yemali kubantu abane-RA, abagutyungelwe yi-Medicare, abafuna uncedo lokuhlawula iindleko zokuphuma epokothweni ezinxulumene nezonyango ezilishumi ezivunyiweyo ze-FDA ...
Ngaba ubushushu obomileyo bulungile kwi-rheumatoid arthritis?
Ubushushu obufumileyo, obufana neebhafu ezishushu, bunokunceda ekungeneni kobushushu kwiimisipha kwaye bunokubonelela ngesiqabu seentlungu. Umboneleli wezempilo unokucebisa ukuba omile…
Yintoni ebangela i-osteomyelitis engapheliyo?
Uninzi lweziganeko ze-osteomyelitis zibangelwa zii-staphylococcus bacteria, iintlobo zeentsholongwane ezifumaneka rhoqo kulusu okanye empumlweni yabantu abasempilweni. Iintsholongwane zingangena…
Umbuzo oqhelekileyo: Yeyiphi inkqubo ekhusela ingqondo kunye nomqolo?
Iimenges ziimbumba ezigubungela kwaye zikhusele ingqondo kunye nomqolo womqolo. Zintathu izaleko zeminyango: Ukuhlala ixesha elide, elikufutshane nethambo. IArachnoid, ethi…
Kwenzeka ntoni xa ungenayo ithenda?
Ukuba ayishiywanga ingakhange inyangwe, ekugqibeleni inokubangela ezinye iingxaki zonyawo kunye nemilenze, ezinje ngokudumba kunye nentlungu kwimigudu kwiinyawo zakho (plantar…
Upheka inyama yengulube ngemizuzu emingaphi?
Ndifanele ndipheke ixesha elingakanani ukupheka inyama yam yehagu okanye inyama yengulube? Umgaqo wesithupha wenyama yehagu kukupheka imizuzu engama-25 ngeponti yenyama…
1 2 ... 6,772 Okulandelayo
Molo, igama lam ndinguMariya. Kwibhlog yam ndibelana ngamanqaku anomdla malunga nomsebenzi wam- ndingugqirha wamathambo.
Umbuzo: Ngaba i-PRP inganyanga isifo samathambo?
Uziva njani xa une-osteoporosis?
Umbuzo wakho: Kwenzeka ntoni ukuba ndihamba kakhulu emva kokutshintshwa kwesinqe?
Umbuzo: Wenza ntoni i-septic arthritis emzimbeni?
Ngaba unganxiba iibhutsi zeenkomo ngomlenze wokufakelwa?
Ngaba i-UTI inokubangela i-osteomyelitis?
Umbuzo wakho: Ngaba i-Ashwagandha ilungile kwi-osteoarthritis?
© 2021 Ugqirha weenyawo wakho
Abezonxibelelwano | Ngathi | Umgaqo-nkqubo wabucala kunye neeKuki
UKUQWALASELWA KWABASEBENZI ABALUNGILEYO! Zonke izinto zithunyelwe kwisiza ngokungqongqo ukulungiselela ulwazi kunye nemfundo! Ukuba uyakholelwa ukuba ukuthunyelwa kwayo nayiphi na into kunyhasha ilungelo lakho lokushicilela, qiniseka ukuba unxibelelana nathi kwifom yoqhakamshelwano kwaye nezinto zakho ziya kususwa!